Ka Hor Kulanka UCL Ee Real vs. PSG - Ogow 5 Dagaal Oo Suuqa Ah Oo Dhexmaray Labadan Koox » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ Champions League/Ka Hor Kulanka UCL Ee Real vs. PSG – Ogow 5 Dagaal Oo Suuqa Ah Oo Dhexmaray Labadan Koox
Kooxaha Real Madrid iyo PSG ayaa waxay wada dheeli doonaa Isbuucan gaara ahaan Arbacadda kulan Champions League ka tirsan, wuxuuna lugta koowaad uu ka dhici doonaa garoonka Los Blancos, ee ku yaala caasimada dalka Spain.
Ciyaartaan ayaa waxay tahay mid aad loo wada sugayo, waxaana labadda dhinac ciyaartoydooda ay yihiin kuwa wada diyaar-garowgii ugu dambeeyay, kaasoo ay isugu diyaarinayaan ciyaartaan aadka u adag.
Maamulayaasha labadda kooxood oo siyaabo kala duwan uga hadlay kulankaan waxay muujiyeen inay doonayaan inay guuleystaan ciyaartaan, waxaana ay sheegeen inay waajib ku tahay inay labinta ay helaan.
Dadka ka faalooda ciyaaraha oo dhankooda ka hadlay Dheeshan waxay hoosta ka xariiqeen in kulanka uu noqon doono mid labadda dhinac aysan si fudud ku jabi doonin, islamarkaana ay si fiican isku soo adkeen doonaan.
Shaqsiyaadka caanka ah ee ka hadlay ciyaartaan waxaa kamid ah, Ra’iisul Wasaaraha dalka Spain, ninka lagu magacaabo Mariano Rojoy, kaasoo muujiyay inuu xiiseynayo daawashada ciyaartaan.
Xidigaha saameynta ugu badan ku yeelan doono ciyaartaan ayaa waxaa lagu sheegay weerar yahanada labadda kooxood kuwaasoo kala ah: BBC oo Madrid ay wadato iyo MCN, oo PSG, waxaana ay labaduba yihiin kuwa halis ah.
Sikastaba, marka laga soo tago xiisaha iyo diyaar-garowga kulankaan ee labadda kooxood, waxaa jirta arrin kale, oo xasaasi ah, taasoo ah ciyaaryahano, kuwaasoo ay ku dagaalameen labada kooxood saxiixooda, waxayna kala yihiin:
Waxay ahayd sanadkii 2012 markii Madxweynaha PSG, uu sheegay inuu jeclaan lahaa saxiixa CR7, laakiin kabtanka Portugal uu ka hadlay wuxuu sheegay inuu aad uga fog-yahay arrinkaan – Madaxweynaha Real, ayaana albaabka ka xirtay isana.
Xagaagii 2012-13 ayay ahayd markii Jose Mourinho uu ka tegay Real – Madaxweynaha Madrid oo macalin cusub raadiyay ayaa soo helay Ancelotti, laakiin PSG ayaa caqabad ku noqota kadib inta uusan bixin Todoba Milyan.
Waa niyad jabkii ugu horeeyay ee Real Madrid – Los Blancos ayaa isku deyday saxiixa wiilkaan reer Italy, laakiin PSG oo iska leh Milkiyadda laacibkaan ayaa si cad ugu sheegtay in aysan diyaar u ahayn inay ka beeciso ciyaaryahankeeda.
Xidigaan wuxuu rabay inuu Real ka tago, PSG aad ayay uxiiseyneysa, laakiiin Madrid ayaa albaadka kasoo daalay, waxayna 75 Milyan ay ka siisay Man United, halkaasoo kol dambe uu ugu soo biiray Kooxda caasimada France ka dhisan.
Real Madrid, ayaa laacibkaan muddo dheer raadineysa, waxayna gaartay heer ay utagto waalidkiisa, laakiin ciyaaryahankaan ayaa ugu dambeyn wuxuu doortay inuu ku biiro Kooxda dalkiisa Hooyo ka dhisan, xili uu iska diiday Los Blancos.
Ugu dambeyn, Neymar, ayaa noqanaya midkii ugu dambeeyay oo ay wada dagaalamaan labadaan kooxood, inkastoo arrintiisa aysan dhinac udhicin, hadana maamulka Madrid, ayaa waxaa marag madoonta inay doonayaa wiilkaan.